ဝိမုတ္တိသုခ (The Bliss Of Emancipation): သံဃာတော်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေး (သို့ ) ဒီလိုလေး လုပ်ကြည့်ရင် ကောင်းမလား? (ပြန်လည် ဝေဖန်ဆွေးနွေးမှု ၁၃)
သံဃာတော်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေး (သို့ ) ဒီလိုလေး လုပ်ကြည့်ရင် ကောင်းမလား? (ပြန်လည် ဝေဖန်ဆွေးနွေးမှု ၁၃)
မောင်ဥဂ္ဂါ ( http://ogga.mmgenius.com ) ၏ ပြန်လည်ဝေဖန်ဆွေးနွေးမှု
ဗုဒ္ဓတရားတော်တွေ ဟာ အစ အလယ် အဆုံး သုံးပါးကောင်းခြင်းနဲ့ ပြည့်စုံတယ် နောက်ပြီး ဗုဒ္ဓတရားတော် တွေကို လောကုတ် နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်ရုံသာမက လက်ရှိဘ၀ လောကီ အရေးတွေမှာပါ အသုံးဝင်တယ် ဆိုတာ မိချောင်းမင်းကို ရေခင်းမပြနေတော့ပါဘူး။ ဗုဒ္ဓတရားတော်တွေကို လောကီလူဘောင် လူမှုရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး စတဲ့ နေရာတွေမှာ ဗုဒ္ဓတရားတော်တွေ ကို ကောက်နှုတ် အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။
သာသနာ့ဝန်ဆောင် သံဃာတော်တွေက သိပြီးသား ဗုဒ္ဓဓမ္မတွေကို ဒကာ ဒကာမတွေ လောကီရေးမှာ အသုံးပြုနိုင်ဖို့ လောကီပညာရပ်တွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်လေ့လာမှုတွေလုပ်ပြီ ဆုံးမနိုင်မယ်ဆိုရင် ဗုဒ္ဓဓမ္မတွေဟာ နေ့စဉ် လူနေမှု ဘ၀တွေမှာ သက်ဝင် လှုပ်ရှားနေမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ အရင် ရှိမ်းမာကာ ဆိုတဲ့ နိုဗယ်ဆုရ ဘောဂဗေဒ ပညာရှင်ကြီးရဲ့ ငယ်သော်လှ၏ စာအုပ်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ဘောဂဒေဗ အမြင်နဲ့ ရေးသားထားတာတွေနိုင်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက ကျွန်တော်တွေးထားတာ တစ်ခုပါ ကျေးလက်ဒေသ ဖွံဖြိုးရေးနဲ့ ပတ်သတ်ပြီးတော့ပါ။ ကျေးရွာ တွေမှာ သံဃာတော်တွေဟာ လူထုကို သြဇာ အတော်လေးရှိပါတယ် ဒါကြောင့် ပရဟိတ စိတ်ဝင်စားတဲ့ သံဃာတော်တွေကို ကျေးလက်ဒေသ ဖွံဖြိုးရေးနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ အသိအမြင်တွေ စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတွေကို သိရှိသွားရင် ကျေးလက်ဒေသအတွက် အကျိုးရှိမှာ အမှန်ပါပဲ။ ကျေးလက်ဖွံဖြိုးရေးကို သံဃာတော်တွေက ဦးမဆောင်ပဲ လုပ်နေရင် အဖွဲ့ တစ်ခု ဟာ ဒေသတစ်ခုကို ၀င်နိုင်ဖို့ သက်ဆိုင်ရာမှာ အဆင့်ဆင့် ခွင့်ပြုချက်တွေ တောင်းနေရပါမယ်။ အချိန်ပိုကုန် ငွေပိုကုန်ပါတယ်။ အကယ်၍ သံဃာတော်တစ်ပါးပါးက ဦးဆောင် လိုက်မယ် ဆိုရင် ကြိုးနီတွေကို ဖြတ်သန်းစရာမလို၊ လူထုကိုလည်း ထွေထွေထူးထူး ပြောနေစရာ မလိုပဲ ကျေးလက်ဒေသ ဖွံဖြိုးရေးကို အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်နိုင်မှာပါ။
အခုလောလောဆယ်မှာ ဒီလိုမျိုးလုပ်တာ သိပ်ရှားပါသေးတယ်။ ကျွန်တော် သိသလောက် ဆရာတော် ဦးနာယကရဲ့ မန္တလေးဖောင်တော်ဦး ဘုန်းတော်ကြီးသင်ပညာရေးကျောင်း နဲ့ ဆရာတော်ဦးကောသလ္လ (ဓမ္မစေတီမဟုတ်ပါ) လောကတ္တစရိယ ဖောင်ဒေးရှင်းပဲ ရှိပါသေးတယ်။ ဒီ အရေအတွက်ဟာ မြန်မာပြည်နဲ့ ယှဉ်ကြည့်ရင် အရမ်းကို နည်းပါး ပါသေးတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အိမ်နီးချင်း ထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုရင် ဒီလို အလုပ်တွေဟာ အတော်အောင်မြင်နေပါပြီ။ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ အိပ်ချအိုင်ဗွီ အေအိုင်ဒီအက်(စ)ဖြစ်ပွားမှုနှုန်းကျဆင်းသွားတာ ဒီရောဂါသည်တွေကို ထိုင်းဘုန်းတော်ကြီးတွေက စောင့်ရှောက်ပေးလို့ ဖြစ်ကြောင်းကြားဖူးပါတယ်။ နောက် ကျွန်တော်နဲ့ တစ်ခါ တွေ့ ဖူးတဲ့ ထိုင်းဘုန်းတော်ကြီး တစ်ပါးဆို ထိုင်းနိုင်ငံက ဆိုးသွမ်းလူငယ်တွေကို လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ ပါဝင် လုပ်ကိုင်စေခြင်းဖြင့် လူဆိုးလေးတွေကို လူလိမ္မာဖြစ်အောင် စီမံကိန်းပုံစံမျိုးနဲ့ လုပ်ဆောင်နေတယ် ဆိုတာကို ကြားဖူးပါတယ်။
လောကီပညာတတ်ထားတဲ့ အတွက် လူထွက်သည် ဖြစ်စေ မထွက်သည်ဖြစ်စေ သာသနာရေးရာ၊ နိုင်ငံဖွံဖြိုး စေဖို့ရာ တစ်ထောင့် တစ်နေရာကနေ အသုံးဝင်နေမှာပါ။ နောက် တတ်ထားတဲ့ လောကီပညာရပ်တွေကို ဗုဒ္ဓအဆုံးအမတွေ နဲ့ ပေါင်းစပ်ပြီး နေ့စဉ်လူနေမှုဘ၀တွေမှာ လက်တွေ ကျင့်သုံးနိုင်ဖို့ သံဃာတော်တွေ က ဆုံးမနိုင်မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ မြန်မာပြည်ဟာ သာယာအေးချမ်းတဲ့ ပတိရူပ နိုင်ငံဖြစ်လာဖို့ မြေကြီး လက်ခတ် မလွဲနိုင် ဟု ယုံကြည်မိပါသည် ကိုဝိမုတ္တိသုခ ခင်ဗျား………………
* ပြန်လည်ဝေဖန်ဆွေးနွေးမှု ၁၂